Tetik'asa tsara indrindra an'ny 24 Music Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-pankasitrahana
Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 Music Tattoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 18, 2016
Nandritra ny taona maro, ny olona sasany dia nampifandray ny fampiasana tatoazy ho fomba iray hanehoana fihetsika manohitra.
1. Tsara tarehy mozika tattoo hevitra amin'ny vehivavy Neck
Tsy misy na dia mamy toy ny mozika aza. Tsy misy olona tsy mankasitraka ny làlana #music na ny iray hafa. Izany no antony mahatonga ny tato-tsarimihetsika ho lasa malaza eo amin'ny olona sasany.
2. Lahatsary fanoratana an-tsoratra tato an-tsoratra momba ny zazavavy
Ny tongony dia tsy mety ho ny ampahany ratsy amin'ny vatany izay ahafahan'ny #tattoo mozika. Rehefa vita tsara izy dia ho tianao ny tongotrao.
3. Fehezin'ny mozika tokana ho an'ny lehilahy
Ny tanana dia afaka mijery tsara kokoa rehefa mahazo tatoazy toy ity. Ny fanamarihana an-kira dia azo soratana amin'ny tanana mitovy. Ny lahy sy ny vavy dia afaka mampiasa io famolavolana io.
4. Cool music lyrics tatoazy fanombohana hevitra ho an'ny ankizivavy kely
Ny hatsaran-tarehy dia mijery ny mason'izao tontolo izao ary ity tatoazy mozika ity dia tsy mitantara tantara ratsy. Raha mieritreritra zavatra mahafinaritra ianao, ity mozika #design ity dia mahatonga ny fahasamihafana rehetra.
5. Ny mozika kely dia manamarika tato ho ato ao an-tsofiny
Mihaino ny sofina sy ny mozika. Eritrereto ny tsipika mozika nosoratana ao ambadiky ny sofina. Tsara tarehy izy ary tsy mahita maso. Na izany aza, manintona ny saina izy isaky ny mahita azy io. Ahoana ny hevitrao momba an'io tetikasa io?
6. Toto mozika mafana amin'ny ankizivavy kely
Ny mijery chic dia ny maka mozika tattoo tsara. Tsy misy filazalazana momba ny halaviran'ny olona hiresaka momba ny fomba mahafinaritra ny tatoavinao mozika rehefa tsy manodidina anao.
7. Tsara ny mozika tato ho ato amin'ny legioma vavy
Tsy misy fanavakavahana eo amin'ny lahy sy vavy amin'ny resaka tatoazy mozika tahaka izao. Ny fomba fiasan'ny mozika tato ho lasa fitaovana lamaody dia ny antony ahitantsika lehilahy sy vehivavy izay vonona ny hiditra amin'ny endrika tahaka izany.
8. Tato anaty mozika nentanim-panahy tamin'ny taolan'ny vehivavy
Tsy azonao atao ny mandà fa tsy mahafinaritra ny mozika tattoo. Rehefa manana tato-tsarimihetsika mahafinaritra toy izany ianao dia maro ny olona no hijery izany hatrany.
9. Mozika mahafatifaty tsara tarehy eo amin'ny ankilany
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahazo mpanakanto mahay izay hanampy anao amin'ny endrika mahatalanjona.
10. Sarimihetsika marevaka marevaka eo amin'ny lafivalon'ny tovovavy
Ny tato an-tsehatra tahaka an'io dia afaka hosoratana amin'ny ampahany amin'ny vatany. Rehefa manana izany eo amin'ny faritry ny vatanao ianao, dia tsy mitsahatra mijery tsara izy.
11. Tattoo mozika an-tsoratra amin'ny vehivavy amin'ny soroka
Ny fandaniana an'io tatoazy mozika io dia mety tsy ho lafo tahaka ny eritreritrao. Maro ireo tolotra an-tserasera izay ahafahanao mahazo tato-tsarimihetsika amin'ny vidiny mahasalama.
12. Tato anaty mozika marevaka eo amin'ny tanana tanana
Izany no mahatonga ny olona maro mampiasa ny mpanakanto amin'izao fotoana izao mba hahazoana tattoos mahatalanjona toy izany. Amin'ny fiafaran'ny andro dia ianao no tokony hankasitrahan'ny rehetra.
13. Lovam-pahatsiarovana mozika tsara tarehy momba ny vehivavy vavy
Ny olona sasany dia mihevitra fa ny tononkalo mifintina amin'ny vatany dia fantatra amin'ny anarana hoe radicals. loharanon-tsary
14. Mozika tsotra ho an'ny tati-bolana
Misy ireo toerana izay heverina ho voarara ny tatoazy raha any amin'ny toerana sasany, ireo mpihaino tatoazy dia heverina ho gangsters. loharanon-tsary
15. Tononkalo mozika lehibe tato anaty tononkalon'ny lehilahy
Fotoana maro no niova ary ny tatoazy dia nanjary #idea izay anehoan'ny olona ny fampiasana tatoazy mozika. loharanon-tsary
16. Tovolahy mozika tato an-tonta ao an-tsainy
Tsy mpihira fotsiny no mampiasa tatoazy mozika fa afaka mampita hafatra amin'ireo tatoazy ireo. Ny fampiasana an'io endrika io dia mety ho tsotra na sarotra. Ianao no manapa-kevitra ny karazana noteo azonao ampiasaina. loharanon-tsary
17. Ny tato an-kirakira mozika nentim-paharazana nanentana ny saina ho an'ny vehivavy
Be mpitia mozika maro no mampiasa io endriny io mba hanehoana malalaka ny fihetseham-pony, ny famoronana ary ny fitiavana ny mozika. loharanon-tsary
18. Tattoo tsotra mozika amin'ny lehilahy tànana
Azonao atao koa ny mamorona tetikasa hafa amin'ny tato-tenanao mozika mba hanomezan-teny maro izay tianao holazaina. loharanon-tsary
19. Ny mozika Super Super tato-tsaina dia maneho hevitra momba ny vehivavy miverina
Ireo tatoazy mozika dia efa nisy talohan'ny taonjato 20. Rehefa mampiasa ireo tatoazy mozika ianao dia miantoka fa manana izany rafitra tonga lafatra izany izay hitantara ny tantaranao. loharanon-tsary
20. Lahatsoratry ny tononkalo fanoratana an-tsoratra eo amin'ny ankilany
Ny ankamaroan'ny olona izay manao tatoazy mozika dia milaza fa mitazona izany endrika na ny dikan'io tatoazy io ao am-pony loharanon-tsary
21. Totozy mozika mafana mahazatra mamolavola hevitra eo amin'ny vavony vavy
Hanambara aminao foana izahay fa ny zavatra tsara indrindra azonao atao alohan'ny handehananao sary hosoka dia ny fanaovana fikarohana voalohany. loharanon-tsary
22. Ny fitiavan-tanindrazana sy ny mozika dia manoratra amin'ny ankizivavy
Ny fampidirana ny fanamarihana sy ny fitaovan'ny faniriana dia mety hahatonga ny tattoo ho tsara kokoa sy tsara tarehy. Tsy misy na inona na inona izay manakana anao tsy hampandroso ny voninkazo, ny karandohany, ny endriky ny biby na ny karazan-drafitra izay azonao ampiasaina handalinana ny tantaranao. loharanon-tsary
23. Manao tato-tsarin'ny mozika mozika amin'ny lehilahy tanana
Maro ireo tatoazy mozika ao amin'ny aterineto. Mahagaga fa ireo tatoazy mozika izay aseho ao amin'ny aterineto dia mety ho hafa amin'ny vatanao. loharanon-tsary
24. Mozika fanoratana mozika an-tsary momba ny vatan'ny vehivavy
Misy karazana mozika marobe izay azonao ambolena rehefa manoratra ny endriky ny vatanao ianao. Tsara indrindra ny fikarohanao ny karazan-tsoratra mety azonao ampiasaina alohan'ny hamokaranao ny iray amin'ny vatanao.
Ny famolavolana dia azo ampiasaina ho fampahatsiahivana ireo zavatra maro izay azonao natao nandritra ny fiainana. Ny mozika dia mozika ary ireo izay tia ny fiainana ihany no afaka mampiasa ny famolavolana azy mba hifandray hatrany hatrany. loharanon-tsary
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa Music Tattoos
tattoos voronatattooselefanta tatoazyraozy tatoazycat tattoostattoo ideastattoos mahafatifatytatoazy fokotattoo cherry blossomTatoazy ara-jeometrikatattoos crosstattoo watercolorcompass tattooNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoo eyeAnkle Tattoostato ho an'ny vatofantsikatratra tatoazytattoo octopusanjely tattoosmoon tattooshenna tattootattoos sleevetattoo infinitymozika tatoazymehndi designHeart Tattoostattoos ho an'ny lehilahytanana tatoazytatoazy ho an'ny zazavavytatoazy voninkazorip tattoostattoos rahavavylion tattoostattoos mpivadyeagle tattoosnamana tattoos tsara indrindrascorpion tattooloto voninkazotattooskoi fish tattootattoos armarrow tattootattoos backtatoazy loloTattoo Featherfitiavana tatoazydiamondra tattoomasoandro tatoazytattoos foot